14 ayaa ku dhintay dagaalka Muqdisho - BBC Somali
14 ayaa ku dhintay dagaalka Muqdisho
Image caption Dagaalka waxa ku dhaawacmay ugu yaraan 50 qof oo rayid u badan
Ugu yaraan 14 qof ayaa ku geeriyootay in ka badan 50 kalana waa ay ku dhaawacmeen dagaalo culus oo ka socda Muqdisho kuwaas oo u dhaxeeya ciidamada dowladda oo ay taageerayaan kuwa AMISOM iyo kooxaha ka horjeeda ee islaamiyiinta Mucaaradka.
Dagaalka oo bilowday aroortii hore ee saaka (Khamiis) ayaa waxaa uu hadda xooggiisu ka socdaa degmooyinka Cabdicasiis, Kaaraan, Shibis iyo Hawl-Wadaag waxana dhinacyada dagaallamaya ay adeegsanayaan madaafiic, hoobiyayaal iyo qoryaha fudud ee darandoorriga u dhaca.
Sarkaal ka tirsan kooxaha gaadiidka gurmadka deg degga ah ayaa BBC u sheegay in ay qaadeen dhaawaca in ka badan 40 qof.
Sarkaalku wuxuu kaloo xaqiijiyay dhimashada 11 ruux oo u badnaa rayid hubka la isku ridayo xaafadahooda uu ku gaaray.
Waxaa laga cabsi qabaaa in dhimashada iyo dhaawacuba ay sii kordhaan maadaama uu dagaalkii weli socdo.
Dagaalka maanta ayaa u muuqda mid qorsheysan oo ay qaadeen ciidamada dowladda waxaana maalmihii u dannbeeyay la arkayay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo loo daadgureyno aagagga hore ee dagaalka.
Dhaawcyada ugu badan waxa la gaarsiiyay isbitaalka Keydsaneey ee duleedka degmada Kaaraan oo ay maamusho Bisha Cas ee Soomaaliyeed.